Hair Care | Types | GALANZ Beauty Products Myanmar
Welcome to Galanz Beauty Products Myanmar
Shower for Women
Ficial Foam For Women
Storm Perfume for Men
Articles News & Events Our Videos
Galanz Moisturizing Treatment Shampoo Darkening (New) ( 200 ml, 400 ml)
ဆံပင်သား အရောင်ပြောင်းနေသောသူများ Moisturizing ပါဝင်သည့်အတွက် ဆံပင်ကို စိုပြေနေစေပါသည်။ ဆိုးဆေးအနက်ရောင် သုံးသူများအတွက် အထောက်အကူပြု Leaving Hair Natrually Black With Extra Lusture ဖြစ်သည့်အတွက် ဆံပင်နက်ပြောင် စိုပြေလာစေပြီးဆံပင်သား ပုံမှန်ဖြစ်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။ Pro Vitamin B5 သည် ဆံပင်အရင်းမှအဖျားထိ သန်စွမ်းစေပါသည်။ Vitamin E သည် အစိုဓါတ် လက်ကျန်ထိန်းသိမ်းထားပြီး ဆံပင်သားကိုချောမွေ့စေပါသည်။ UV Filter သည် နေရောင်ခြည်မှလာသော ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်ကိုကာကွယ်ပေးပါသည်။
Galanz Moisturizing Treatment Shampoo Darkening ( 200 ml, 650 ml)
ဆိုးဆေးအနက်ရောင် သုံးသူများအတွက် Leaving Hair Naturally Black With Extra Lusture ဖြစ်သည့်အတွက် ဆံပင်နက်ပြောင်စိုပြေလာစေပြီး ဆံပင်သားပုံမှန်ဖြစ်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။ Pro Vitamin B5 သည် ဆံပင်အရင်းမှ အဖျားထိ သန်စွမ်းစေပါသည်။ Vitamin E သည် ဆံပင်တွင်ရှိသော အစိုဓါတ်လက်ကျန် ထိမ်းသိန်းပေးပြီး ဆံပင်ကို နူးညံ့ပျော့ပျောင်းစေပါသည်။ UV Filter သည် နေရောင်ခြည်မှလာသော ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ဒဏ်ကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ဆံပင်သား အရောင်ပြောင်းနေသောသူများအား Moisturizing ပါဝင်သည့်အတွက် ဆံပင်ကို စိုပြေနေစေပါသည်။ ပေါင်းဆေးပါဝင်ပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် ပုံမှန်ပေါင်းတင်ပေးသလို နူးညံ့စေပါသည်။
Galanz Moisturizing Treatment Shampoo Scalp Care (New) ( 200 ml, 400 ml)
ဦးရေပြားယားယံတတ်သူများ၊ ဗောက်ရှိသူများအတွက် အထူးစီမံဖော်စပ်ထားပါသည်။ ဆံပင်အတွင်းပိုင်းသို့လည်း အစိုဓါတ်ကို ညီညွတ်မျှတစေပြီး ZPT (ဗောက်သေဆေး) ပါဝင်ပါသည်။ Pro Vitamin B5, Vitamin E တိြုွ့ကွယ်ဝစွာ ပါဝင်ပါသည်။ ဆံကေသာနှင့် ဦးရေပြားကို ရှင်းသန့်စေပြီး ဆံကေသာ ညီညွတ်မှုကိုလည်း များစွာ အထောက်အပံ့ ပေးပါသည်။ နေရောင်ခြည်မှ လာသော ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
Galanz Moisturizing Treatment Shampoo Scalp Care ( 200 ml, 650 ml)
ZPT အဆင့်မြင့် ဦးရေပြားသန့်စင်ဆေးရည် ပေါင်းစပ်ပါဝင်ထားသည့်အတွက် ဦးရေပြားကို သန့်ရှင်းစေပါသည်။ ဗောက်ထခြင်း၊ အဖတ်ကွာခြင်း၊ ယားယံတတ်ခြင်းများကို ဖယ်ရှားရန် နှင့် ဆံပင်အရင်းတွင် အစိုဓါတ်လက်ကျန် ထိန်းပေးနိုင်ရန်အတွက် အထူးစီမံထားသော ခေါင်းလျှော်ရည် ဖြစ်ပါသည်။Moisturizing Treatment Shampoo ဖြစ်သည့်အတွက် ဆံပင်တွင် အမှန်တကယ်လိုအပ်သော ရေဓါတ်ကို ပြန်ဖြည့်ပေးပါသည်။ Pro Vitamin B5 သည် ဆံပင်အရင်းမှ အဖျားအထိသန်စွမ်းစေခြင်း၊ ဆံပင်အဖျား နှစ်ခွဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း၊ Vitamin E ဆံပင်တွင်ရှိသောအစိုဓါတ်လက်ကျန်ကို ထိန်းသိမ်းပေးပြီး ဆံပင်ကို နူးညံ့ပျော့ပျောင်းစေပါသည်။ UV Filter သည် နေရောင်ခြည်မှလာသော ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်ကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
Galanz Moisturizing Treatment Shampoo Dry & Damaged Hair (New) ( 200 ml, 400 ml)
ခြောက်သွေ့ပြီး လွန်ကဲပျက်စီးနေသော ဆံပင်များအတွက် အထူးစီမံဖော်စပ်ထားပါသည်။ ဆံပင်နှင့်ဦးရေပြားကို ကျန်းမာသန်စွမ်းစေနိုင်သော Vitamin များလည်ြးွကယ်ဝစွာ ပါဝင်ပါသည်။ Pro Vitamin B5, Vitamin E ပါဝင်မှုကြောင့် ဆံပင်အရင်းအမြစ် ခိုင်မာခြင်း၊ အရောင်စိုပြေတောက်ပခြင်းတို့ကိုကောင်းမွန်စေပြီး အထူးသဖြင့် လှိုင်းသား၊ ကောက်သားရှိသော ဆံပင်များကို ဖြောင့်စင်းလိုသူများအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ နေရောင်ခြည်မှလာသော ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကိုကာကွယ်ပေးပါသည်။
Galanz Moisturizing Treatment Shampoo Dry & Damaged (200 ml, 650 ml)
Pro Vitamin B5 ပါဝင်သည့်အတွက် ဆံပင်အရင်းမှ အဖျားအထိသန်စွမ်းစေပါသည်။ Vitamin Eသည် ဆံပင်တွင်ရှိသော အစိုဓါတ်လက်ကျန်ကို ထိန်းသိန်းပေးပြီး ဆံပင်ကို နူးညံ့ပျော့ပျောင်းစေပါသည်။UV Filter သည် နေရောင်ခြည်မှလာသော ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။Hygrolyzed Keratin သည် ဆံကေသာကို ကြာရှည်စွာ စိုပြေနေစေပြီး ပျက်ဆီးနေသည့် ဆံကေသာကို ပြန်လည်ပြုပြင်ရာတွင် အထောက်အကူပြုပါသည်။တစ်ကြိမ်လျှော်လျှင် တစ်ကြိမ် ပေါင်းတင်သကဲ့သို့ နူးညံ့စေပါသည်။
Galanz Moisturizing Treatment Shampoo Normal Hair ( 200 ml, 650 ml)
Pro Vitamin B5 ပါဝင်သည့်အတွက် ဆံပင်အရင်းမှ အဖျားအထိ သန်စွမ်းစေပါသည်။ Vitamin Eသည်ဆံပင်တွင်ရှိသော အစိုဓါတ်လက်ကျန်ကို ထိန်းသိမ်းပေးပြီး ဆံပင်ကို နူးညံ့ပျော့ပျောင်းစေပါသည်။UV Filter သည် နေရောင်ခြည်မှလာသော ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ အမှန်တကယ်လိုအပ်သော Vitamin များနှင့် ပြုလုပ်ထားသည့်အတွက် နူးညံ့ပျော့ပျောင်း တောက်ပြောင်နေစေပြီးအစိုဓါတ်ကိုလည်း ဖြည့်ဆည်းပေးသည့်Moistruizing Treatment Shampooဖြစ်ပါသည်။ တစ်ကြိမ်လျှော်လျှင် တစ်ကြိမ် ပေါင်းတင်သကဲ့သို့ နူးညံ့စေပါသည်။
Galanz Leave On Hair Serum (150 ml)
ထိုင်းမှိုင်းနေသော ဆံကေသာများကို စိုပြေတောက်ပြောင်စေပါသည်။ ဆံကေသာကို အာဟာရဖြည့်စွမ်းပေးပါသည်။ ဆံသားအဖျားကွဲခြင်း၊ ခြောက်သွေ့မာကျောခြင်းများကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ Pro Vitamin B5 သည် ဆံပင် အရင်းမှအဖျားထိ သန်စွမ်းစေပါသည်။ Vitamin E သည် ဆံကေသာကိုပိုမိုတောက်ပြောင်စေရန်နှင့် အစိုဓါတ်လက်ကျန်ကို ထိန်းသိမ်းပေးပါသည် ။ Mineral Oil သဘာဝအဆီအနှစ်များနှင့် ပြုလုပ်ထားသည့်အတွက် ထိုင်းမှိုင်းနေသော ဆံကေသာကို ပြန်လည်တောက်ပြောင်စေပါသည်။ UV Filter သည် နေရောင်ခြည်မှလာသော ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်ကို တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ဆံသား မစိုမခြောက်အချိန်နှင့် ခြောက်သွေ့ချိန်များတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Galanz Intensive Hair Conditioner (150 gm)
ဆံပင်သားကို တစ်မျှင်ခြင်း ဆံကေသာ အရင်းမှအဖျားအထိ သန်စွမ်းအောင် စွမ်းဆောင်ပေးပါသည်။Pro Vitamin B5 သည် ဆံပင်အရင်းမှအဖျားထိ သန်စွမ်းစေပါသည်။ Aloe Vera သည် ဦးရေပြားနှင့် ဆံပင်ရှိ အစိုဓါတ်လက်ကျန်ကို ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။ UV Filter သည် နေရောင်ခြည်မှလာသောခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်မှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ဂျုံမှရရှိသော ပရိုတင်းကြောင့် ဆံသား ဝိတ်လေးပြီးနူးညံ့စေပါသည်။
အစဉ်အမြဲတန်ဖိုးထား လေးစားရပါသော လက်လီ၊ လက်ကား အရောင်းကိုယ်စားလှယ်တော်ဆိုင်ကြီးများ၊ ကုန်တိုက်ကြီးများ၊ စူပါမားကတ်များ၊ စတိုးဆိုင်များမှ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံကြီးများ၊ စဉ်ဆက်မပြတ် အမြဲဝယ်ယူ သုံးစွဲသူများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းတို့နှင့် ပြည့်စုံပါစေကြောင်း ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါတယ်ရှင်
No.60, Ohn Pin Street, Kyee Myin Daing Township, Yangon, Myanmar Tel : ( +95)-1-514392, 524714, 525687 , 09786365643 , 09786365642
No.26, 11th Street, between 77 & 78 Street, Aung Myay Thar Zan Tsp, Mandalay, Myanmar. Tel : ( +95)-2-4069432, (+95)-9-799630617, 402546345, 402546346
© 2018-2020 Galantz Beauty Product Myanmar. All rights reserved.
Design by NetScriper